Skotisma zazavavy : haneho firaisankina etsy Andohatapenaka · Aponga
News Mada : Divers
Skotisma zazavavy : haneho firaisankina etsy Andohatapenaka
«Mamela marika» ny lohahevitra entin’ny skotisma zazavavy etsy Andohatapenaka, anio,. hanaovana tomban’ezaka ireo asa soa iray isan’andro ataony. Inona ny voka-tsoa azon’ireo nohasoaviny Raha refesina ny tontolo nandalovan’ny skoto zazavavy sy ny tontolo tsy nandalovany, inona ny mahasamy hafa azy ireo
Hanaovana ny tomban’ezaka momba izany indrindra ny hetsika hotanterahina miaraka etsy amin’ny CDA Andohatapenaka anio. Anisan’ny marika avelan’ny sampana mavo 6 – 9 taona) sy maintso (10- 14 taona) ny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ireo mpianatra avy amin’ny fianakaviana marefo.
Hizara hafaliana sy traikefa kely ananany koa izy ireo.
Ho an’ny sampana mena kosa (15 – 22 taona), hamboly zanakazo fihinamboa miisa 400 ao Bourbon Analamahitsy sy 100 any Ampangabe izy ireo ho mariky ny fitsinjovana ny zavaboahary.
Marihina fa efa nanomboka ny 8 febroary ny fambolen-kazo ary mbola hitohy kosa ny 8 – 10 marsa izao any Sahafanilo. Zana-kazo maherin’ny 2.000 no kasaina hambolena amin’ity taona ity.
Misy 10 tapitrisa mahery ireo skoto zazavavy maneran-tany, anisany ireo 50 000 isa eto Madagasikara izay ivondronan’ny Fanilon’i Madagasikara, skoto zazavavy katolika. Mpanazava eto Madagasikara, skoto zazavavy protestanta ary ny Kiadin’i Madagasikara skoto ekiomenika.
Nikatroka izy ireo nanomboka eo amin’ny fahenin-taony, ary mandra-pahafatiny. Nobeazina hanaraka ny fomba fisainana sy fiainana skoto, hiaina ny fitsipika sy lalàna na aiza na aiza alehany mba hanasoa ny tanindrazany.
Tia Tanindrazana : Divers
Tsena etsy Antsahamamy Tsy vita hatramin’ny farany, raikitra ny gidragidra
Ino Vaovao : Divers
RAHARAHA OTIV BOENY : Milaza fa hitondra vahaolana ny «credit général Co S.A»
JONO MAKAMBA ETO MADAGASIKARA : Nisokatra nanomboka ny 1 marsa nifoha 2 marsa teo
FIOVA – VAKINANKARATRA : Hatodika amin’ny tsena ny famokarana hatao manomboka izao
« Chèque sans provision » Ny tsara ho fantatra
AAA-TIKO Andranomanelatra Nampitomboina ny isan’ny emmoreg miambina azy
Communication – La convergence online/ offline discutée
Mahamasina : Un aliéné mental a fait du spectacle